Hab -nololeedka badda: sifooyinka, noocyada, dhirta iyo fauna | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 21/09/2021 12:43 | Deegaanka
Dabeecadda waxaa jira noocyo kala duwan oo deegaanka ah iyadoo loo eegayo sifooyinkooda iyo deegaanka laga helo. Mid ka mid ah nidaamyada deegaanka waa kan badda. Hab -nololeedka badda waa kuwa martigeliya qadar aad u badan oo nolosha ah iyo il aad u kala duwan oo aad u weyn oo ah kala duwanaanshaha noolaha ee dhirta, xayawaanka, noolaha iyo molecules. Inkastoo muuqaalka nidaamka deegaanka ee badda Waxay u ekaan kartaa mid isku mid ah, waa mid ka mid ah hab -nololeedyada ugu kala duwan ee meeraha. Waxay leedahay astaamo ka duwan tiirarka ilaa kulaylaha adduunka oo dhan. Waxaa jira malaayiin bulshooyinka noolaha ah oo deggan hab -nololeedkaan waxayna ka kooban yihiin meelo ay ka buuxaan nolol.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa dhammaan astaamaha iyo muhiimada ay leedahay hab -nololeedka badda.
1 Waa maxay hab -nololeedka badda
3 Dhirta iyo noolaha hab -nololeedka badda
4 Noocyada hab -nololeedka badda
Waa maxay hab -nololeedka badda
Ecosystem -ka badda waa nooc ka mid ah hab -nololeedka biyaha, oo lagu garto inay lahaadaan biyo cusbo sida ugu weyn. Hab -nololeedka badda waxaa ku jira hab -deegaanno kala duwan, sida badaha, badaha, meelaha milixdu ku badan tahay, xeebaha dhuxusha, biyaha xeebaha oo aan qotodheerayn, estuaries, harooyinka biyaha cusbada ee xeebaha, xeebaha dhagaxa ah, iyo aagagga xeebaha.
Sida aan qiyaasi karno, noocyo kala duwan oo ka mid ah hab -nololeedka badda ayaa si wadajir ah u taageera kala duwanaanshaha la yaabka leh ee dhirta iyo xayawaanka. Qaybta xigta waxaan ku arki doonnaa waxa dhirta badda iyo kooxaha xayawaanka badda ka kooban noolaha noolaha, iyo astaamaha jirka iyo kiimikada ee qeexa.
Ururinta dhammaan hab -nololeedka badda ayaa 70% dhulka dushiisa ah. Hab -nololeedka badda waxaa lagu qaybiyaa gobollo kala duwan. Waxay ku jiraan kooxda hab -nololeedka biyaha. Waxay ka kooban yihiin biyo leh milix la kala diray oo ah qaybta ugu weyn. Cufnaanta biyaha milixdu waxay ka sarraysaa kuwa kale ee hab -nololeedka biyaha biyaha macaan, kuwaas oo dammaanad qaadaya badbaadada dhirta badda iyo xayawaanka la jaanqaadaya cufnaanta biyahaan sare.
Waxaa jira laba nooc oo aagag ah, taas oo ku xidhan haddii ay helaan iftiinka qorraxda, si loo kala saaro meelaha ifaya iyo meelaha aan iftiinka lahayn. Shaqada caadiga ah ee hab -nololeedka badaha waxay inta badan ku xiran tahay mawjadaha badda, shaqooyinka durdurrada baddu waxay ku salaysan yihiin abaabulidda iyo qaadista nafaqooyin kala duwan, si dhirta iyo noolaha ku nool hab -dhismeedyadaan adag ay u kobcaan una noolaadaan.
Hab -nololeedka badda ayaa ah isha hanti aad u baaxad weyn, oo ka kooban arrimo kala duwan oo bayooloji ah, sida noolaha wax -soo -saarka (dhirta) iyo macaamiisha aasaasiga ah (kalluunka iyo mollusks), macaamiisha labaad (kalluunka hilibka yar) iyo macaamiisha sare (kalluunka hilibka weyn). Cabbirka) iyo noolaha baaba'a (bakteeriyada iyo fangaska). Dhanka kale, qaar ka mid ah waxyaabaha abiotic -ka ayaa qeexa astaamaha hab -nololeedka dabiiciga ah, sida heerkulka, cusbada iyo cadaadiska biyaheeda, iyo cadadka qorraxda ee ay hesho.
Dhirta iyo noolaha hab -nololeedka badda
Dhirta aan la tirin karin, oo ay ku jiraan noocyada quusay iyo kuwa soo baxaya iyo noocyada sabaynaya, ayaa ka kooban noolaha dhirta hodanka ah ee dhammaan hab -nololeedka badda. Si toos ah ula xiriira sifooyinka jirka iyo kiimikada noocyada noolaha badda ee deggan, noocyadaan waxay tusi doonaan qaar ka mid ah ama qaabab kale oo nololeed waxayna sidoo kale yeelan doonaan baahiyo muhiim ah.
Algae waa geedo aad u fiican oo ku jira nidaamka deegaanka badda. Qoysas kala duwan, abtirsiinyo, iyo noocyo kala duwan ayaa ka dhigaya nidaamka deegaanka ee badda in ay la socdaan nolosha iyo midabka, waxayna u qaybsan yihiin algae cawlan, casaan ah, ama cagaar ah. Qaar baa microscopic ah (diatoms iyo dinoflagellates), halka kuwa kale loo tixgeliyo macroalgae, gaar ahaan algae -ka weyn ee la hubo ee hiddaha Macrocystis. Algae waxay had iyo jeer la qabsataa heerkulka iyo sifooyinka kale ee jirka iyo kiimikada ee biyaha ay ku koraan kuna nool yihiin, waxaana lagu qaybiyaa hab -nololeedka badda ee dhammaan gobollada adduunka.
Marka laga soo tago caleenta badda, ubaxa hab-nololeedka badda sidoo kale waxaa ku jira dhowr nooc oo dhir ah, oo ay ku jiraan waxa loogu yeero caleenta badda (qoyska ubaxa ee gambaleelka ah, Cymodoceaceae, Ruppiaceae iyo Posidoniaceae), kuwaas oo ah dhirta kaliya ee ubaxyada ku leh hab-nololeedkaan deegaanka; mangroves (oo ay ku jiraan mangroves: mangle Rhizophora iyo mangroves cad: Laguncularia racemosa iyo noocyada kale) iyo phytoplankton badan.
Badaha, xeebaha iyo hab -nololeedka kale ee badda waxay ka kooban yihiin qaar ka mid ah deegaannada ugu kala -duwan noolaha adduunka, xayawaanka kooxo kala duwan, qoysaska iyo noocyada ayaa ku wada nool dheelitirka noolaha. Dhul -gariiryada iyo kala -soocayaasha waaweyn iyo kuwa yaryar, sida noolaha yaryar, waxay si wada jir ah ugu wada noolyihiin hab -nololeedka badda ee dhulka. Kuwani waa noocyada ugu waaweyn ee fauna ee aan heli karno:
Naasleyda Waxaan ka heli karnaa dhammaan noocyada nibiriyada sida nibiriga buluugga ah, nibiriga cawlan, nibiriga shahwada, orcas, dolphins ... iwm.
Xamaarato: Sida masaska badda, qoolleyda cagaaran, qoolleyda hawksbill ... iwm.
Shimbiraha: Meesha aan ka heli karno pelicans, seagulls, diiqii badda, osprey ... iwm.
Kalluunka: Halkan waxaan ka heli karnaa dhammaan noocyada iyo kala -soocidda kalluunka sida kalluunka baqbaqaaq, kalluunka ruxruxa, kalluunka qalliinka, kalluunka sanduuqa, kalluunka xarafka, kalluunka dhallaanka, kalluunka dhagaxa ah, kalluunka toad, kalluunka balanbaalis, kaligiis, angelfish, rays, sardines, anchovies, tuna … Iwm.
Noocyada hab -nololeedka badda
Wetland: Waxay tilmaamaysaa iridda gacanka ama webiga halkaasoo ay milixdu ka hooseyso waxa aan ka heli karno badaha sare. Waxaa la dhihi karaa waa aag dhexe oo u dhexeeya biyaha milixda iyo biyaha macaan. Waa goobo aad u bacrin ah.
Dabaqyo: Waa gobollo biyo milix leh ama lagoon. Dhulka biyaha ka soo jiida badaha iyo wabiyada, biyuhu aad bay u deggan yihiin mana jiraan wax dhaqdhaqaaq ah. Degaan ahaan, waxay siisaa ilo badan kalluunka, noocyada kala duwan ee mollusks, iyo cayayaanka.
Gawaarida: Waa astaanta wabiyada xeebta, oo leh isbeddelada milixda, si joogto ah u helaya webiga Aguadulce. Xumaanta aan heli karno waxay noqon kartaa carsaanyo, jiir, mas iyo xitaa aniga iyo noocyo badan oo shimbiro ah, iyo waliba noocyo kale.
Mangroves: Waa kaymo ka soo baxa kanaalka dhexe ee u dhexeeya estuary iyo badda. Dhirta ugu weyn waa kayn yar oo loo habeeyay biyaha naxaasta ah. Biyaha mangrove -ka, waxaan sidoo kale ku leenahay kalluun aad u kala duwan, haley ama xamaarato kala duwan, oo geedaha u adeegsada hoy ama si fudud cunto ahaan.
Seerayaasha badda: Waa biyo xeebeed leh qoto dheer oo qiyaastii ah 25 m, hirarku aad uma xoog badna wabiguna ma raaco ku dhawaad ​​wasakh. Mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee sariiraha badda waa in laga hortago nabaad guurka xeebaha.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan nidaamka deegaanka badda iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Nidaamka deegaanka